iPhone SE သည်ဈေးကွက်တွင်အောင်မြင်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၇ ခု | Gadget သတင်း
iPhone SE သည်ဈေးကွက်တွင်အောင်မြင်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၇ ချက်ရှိသည်
Villamandos | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 22/04/2016 12:00 | Apple, မိုဘိုင်း
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့ကအက်ပဲလ်ကတရား ၀ င်တင်ဆက်လိုက်သည် iPhone ကိုအရှေ့တောင်၎င်းသည် ၄ ​​လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်နှင့်အရွယ်အစားသေးငယ်မှုအတွက်ထင်ရှားသည်။ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းဈေးကွက်တွင်လမ်းကြောင်းသည် ၅ လက်မထက်များသောဖန်သားပြင်များဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည် terminal တစ်ခု၏အရွယ်အစားအတိုင်းအတာအောက်ရှိနိမ့်ကျသောမျက်နှာပြင်ပါသည့် terminal တစ်ခုအတွက်စျေးကွက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်နေသည်။ ။
စျေးကွက်ထဲတွင်ဤ iPhone SE ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသံသယဝင်ကြသူအနည်းငယ်သာရှိသည် နှင့်သင်တန်း၏ငါတို့သည်လည်းမပါ။ အကယ်၍ Apple က ၄ လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်ပါသော iPhone တစ်ခုကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါက iPhone 4S နောက်ပိုင်းထိုမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီးနောက်တွင်အကြောင်းပြချက်ရှိလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်ဟာယနေ့စျေးကွက်ထဲရှိ iPhone သစ်၏အနာဂတ်ကိုသံသယဝင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ဤဆောင်းပါးအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအသေးစိတ်ပြောပြပါမည်။ iPhone SE သည်ဈေးကွက်တွင်အောင်မြင်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၇ ချက်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Apple terminal အသစ်ကိုရယူရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားပါကသေချာစွာဖတ်ပါ၊ သင်လိုအပ်သည်ကိုသင်မြင်ပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်တို့၏အကြောင်းပြချက်အားလုံးကိုသတိပြုပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၇ ခုသာရှိမယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ၊ အကယ်၍ သင်ထပ်မံစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့သင်တွေ့လိမ့်မယ်။
1 ဒါဟာစျေးနှုန်းချိုသာပေမယ့်အရာခပ်သိမ်းအတွက် iPhone နေဆဲဖြစ်သည်
2 iPhone 6s နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တူသည်
3 ကင်မရာသည် iPhone 6S နှင့်တူညီသည်
4 ကျနော်တို့ 3D Touch ကိုလက်လွတ်လိမ့်မယ်
5 သုံးစွဲသူများစွာသည် ၄ ​​လက်မအရွယ် screen ရှိသည့် iPhone တစ်ခုကိုလိုချင်ကြသည်
6 မကြာခင်မှာပဲ Apple Pay ကိုကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်ပါပြီ
7 iPhone မှာဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး
ဒါဟာစျေးနှုန်းချိုသာပေမယ့်အရာခပ်သိမ်းအတွက် iPhone နေဆဲဖြစ်သည်
iPhone SE အသစ်သည် ၄ ​​လက်မသာရှိပြီး၎င်း၏စျေးနှုန်းအတွက်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုလျှင်မြန်စွာဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ အဘို့ 399 ဒေါ်လာတစ် ဦး အလွန်ပတ်ပတ်လည်စျေးနှုန်း, ဒါမှမဟုတ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် 489 ယူရို စပိန်စျေးကွက်မှာ၊ ကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ကို ၁၆ ဂစ်ဗားရှင်းနဲ့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအရောင်လေးမျိုးထဲကတစ်လုံးကိုရနိုင်ပါတယ်။
ဤစမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုဝယ်ယူသောမည်သည့်သုံးစွဲသူမဆိုစျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်း၊ iPhone 6s ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဒီနေ့ iPhone 6s ကို ၇၃၉ ယူရိုနဲ့ ၀ ယ်နိုင်တယ်၊ သူ့ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးပုံစံနဲ့။ iPhone SE ကို ၀ ယ်မယ်ဆိုရင်ယူရို ၂၀၀ ကျော်သက်သာမှာဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်အချို့ဆုံးရှုံးသွားမှာပါ.
ပုံမှန်အားဖြင့် Tim Cook မှယောက်ျားများသည် ၁၆ GB GB သိုလှောင်မှုကိုပေးသည်။ သုံးစွဲသူအများစုအတွက်မလုံလောက်။ 16-GB GB model သည်စျေးနှုန်းအနည်းငယ်တက်ပြီး ၅၈၉ ယူရိုအထိဈေးတက်သည်။ iPhone 64s ၏စျေးနှုန်းနှင့်မဝေးသေးပါ။
iPhone 6s နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တူသည်
iPhone 6S နှင့် iPhone SE ၏ပြင်ပကွဲပြားခြားနားမှုများကိုတစ်ချက်ကြည့်လျှင်သိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ အတွင်း၌မူများစွာလျော့နည်းသည်။ ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ Processor ကိုရှာတာပါ Apple က A9,2GB RAM နှင့်အတူ Cupertino flagship ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားတူညီသော။
ဒီပရိုဆက်ဆာနဲ့ PowerVR GT7600 GPU တို့ဟာအကောင်းဆုံးအသင်းကိုဖွဲ့စည်းထားတယ် မည်သည့်အသုံးပြုသူအတွက်အကောင်းဆုံးပါဝါနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန်။ ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ iPhone 6S ထက်သေးငယ်တဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့အတူဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုစစ်ဆေးဖို့ဒီ iPhone SE အသစ်ကိုကြိုးစားပြီးညှစ်ထုတ်ရလိမ့်မယ်။
ကင်မရာသည် iPhone 6S နှင့်တူညီသည်
ဤ iPhone SE ၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ ၄ င်း၏ကင်မရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် iPhone 6s ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်နှင့်တူညီသည်။ နှင့်f/ 12 aperture ဖြင့် 2.2 mega-pixel အာရုံခံကိရိယာ ကျွန်ုပ်တို့လက်၌ကြီးမားသောအရည်အသွေးရှိသောကင်မရာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ဖူးပြီးဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့နီးပါးစုံလင်သောဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဒီ iPhone အသစ်ရဲ့ကင်မရာနဲ့ပါ ဗီဒီယိုတွေကို 4K အရည်အသွေးနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ် ပြီးတော့လူကြိုက်များတဲ့ Live Photos ကိုလုပ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနှစ်ခုကိုလုပ်ချင်ရင် 16 GB Internal Storage ကဒီစွမ်းရည်ရှိတဲ့ iPhone ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ပြcaseနာတစ်ခုထပ်ပေါ်လာ ဦး မှာပါ။
ကျနော်တို့ 3D Touch ကိုလက်လွတ်လိမ့်မယ်
Screen အရွယ်အစားနှင့်ဈေးနှုန်းအပြင် iPhone SE နှင့် iPhone 6s အကြားတစ်ခုတည်းသောကွာခြားချက်မှာဒီဇိုင်းကိုချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်သည် 3D Touch နည်းပညာမရှိခြင်း စုစုပေါင်းလုံခြုံမှုနှင့်အတူ iPhone 6s အသုံးပြုသူများစွာသည်လွဲချော်သွားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုဂရုမစိုက်ပါက၎င်းသည် 3D Touch နည်းပညာကိုမပံ့ပိုးပါက၊ iPhone SE သည်သင်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်နိုင်ပြီးအခြားမည်သည့် iPhone များထက်မဆို ပို၍ စျေးသက်သာသည်။
သုံးစွဲသူများစွာသည် ၄ ​​လက်မအရွယ် screen ရှိသည့် iPhone တစ်ခုကိုလိုချင်ကြသည်
စတိဗ်ဂျော့ဘ်က Apple သည် ၄ ​​လက်မထက်ပိုသောမျက်နှာပြင်ရှိသည့် iPhone ကိုဘယ်တော့မှမဖွင့်တော့ဟုအမြဲပြောခဲ့သည်ဆိုသော်ငြားဈေးကွက်သည်အလွန်ရှင်းလင်းသောပုံစံဖြင့်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ပိုကြီးတဲ့ဖန်သားပြင်နှင့်အတူမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်စျေးကွက်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ စျေးကွက်အတွင်းတွင် ၄ လက်မဖန်သားပြင်များဖြင့် terminal များကိုဆက်လက်ဆက်လက်သုံးစွဲနေသည့်သုံးစွဲသူအမြောက်အများရှိနေသေးသည်.
သုံးစွဲသူအများစုသည်ကြီးမားသောဖန်သားပြင်များရှိသည့်စမတ်ဖုန်းများကိုပိုလိုချင်လာကြသော်လည်း ၄ လက်မဖန်သားပြင်ရှိ terminal ကိုလိုချင်သူများစွာရှိသေးသည်။ ဒီစျေးကွက်တည်ရှိနေပြီး Apple က၎င်းကိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်နည်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
မကြာခင်မှာပဲ Apple Pay ကိုကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်ပါပြီ
၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုများသောအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားသောအားသာချက်တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းအချို့သည်အမြဲတမ်းအသုံးပြုခွင့်ရခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည် Apple Pay ဝန်ဆောင်မှု ကျစ်လစ်သိပ်သည်း device ကို၌တည်၏။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့များသောအားဖြင့်သယ်ဆောင်လာသည့်ပိုက်ဆံအိတ်များထက်အနည်းငယ်လျော့နည်းပြီးကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင်ငွေအမြဲတမ်းရှိနိုင်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ယခုအချိန်တွင် Apple ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုသည်များသောအားဖြင့်နိုင်ငံများစွာတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ ၎င်းသည်လာမည့် ၂၀၁၆ တစ်လျှောက်လုံး Cupertino မှအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်စပိန်သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Apple Music အသစ်ကဲ့သို့သောအခြားအက်ပလီကေးရှင်းများကိုလည်းဒီအိုင်အက်စ်မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
iPhone 5C ဟာအောင်မြင်မှုသိပ်မကြီးလှတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကားစုကလုံးဝတိကျမှန်ကန်မှုမရှိပါဘူး။ ငါတို့ထင်မြင်ချက်အရ၊ ဒီအိုင်ဖုန်းဟာကျော်ကြားမှုထက်နာကျင်မှုများစွာနဲ့ဈေးကွက်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပေမယ့်အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။ အက်ပဲလ်၏အခြားမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များသည်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိဘဲကြီးစွာအောင်မြင်ခဲ့သည် ထို့အပြင် iPhone SE အသစ်သည်လည်း bandwagon တွင်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိလိမ့်မည်။
iPhone SE သည်စျေးကွက်တွင်အရေးပါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်ကောင်းလာလိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားစရာအကြောင်းများစွာရှိသည်။ သို့သော် iPhone အသစ်သည် Tim Cook မှလူများ၏ပထမ ဦး ဆုံးရှုံးနိမ့်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည့်အကြောင်းအရင်းများစွာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအခြားနေ့ရက်ကာလအဘို့ထိုဆွေးနွေးငြင်းခုံထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီ iPhone SE အသစ်ကိုတရားဝင်ပြသတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ဟာ Apple အတွက်ပြတ်ပြတ်သားသားပြfailureနာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးအိပ်ယာဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှကျနော့်အမြင်ပြောင်းလဲသွားပြီး ၄ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိတဲ့မိုဘိုင်းပစ္စည်းကိုမကြိုက်ပေမယ့်အတိုင်းအတာကိုလျှော့ချတဲ့ terminal ကိုပိုကြိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
လည်း ဒီ iPhone အသစ်ရဲ့အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်သူမနှစ်သက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည် လျှော့ထားသော terminal တွင်ကျွန်ုပ်သည် iPhone 6s ကဲ့သို့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတူတူရှိလိမ့်မည်။ ကင်မရာသည် Apple ၏အထင်ကရကင်မရာနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ခြင်းသည်၎င်း၏မျက်နှာသာပေးမှုမှာအခြားအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အက်ပဲလ်သည်စမတ်ဖုန်းများကိုဆက်လက်ရောင်းချလိုသည်။ iPhone 6s နှင့်အတူအောင်မြင်ပြီးသည့်နောက်အရွယ်အစားနှစ်မျိုးရှိသည့်မျက်နှာပြင်များနှင့်အတူဤ SE SE သည်သုံးစွဲသူများအားအရွယ်အစားနှင့်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချသည့် screen ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်မိသားစုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ယခုအချိန်တွင် iPhone SE ကိုဈေးကွက်တွင်မရောင်းချနိုင်သေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည့်အတိုင်းလူတိုင်းနီးပါးသည်အောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလားသို့မဟုတ်အက်ပဲလ်၏ပထမဆုံးရှုံးနိမ့်မှုလားဆိုတာသိရန်အတွက်ရက်အနည်းငယ်အထိစောင့်ရပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုလောင်းခဲ့လျှင်၎င်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်အောင်မြင်မှုများစွာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသေချာသည်။ အထူးသဖြင့် iPhone များရှိလိုသောဆယ်ကျော်သက်များကြားတွင်၊ သို့သော်သူတို့၏ဘတ်ဂျက်သည်၎င်းအတွက်မလုံလောက်ပါ။
iPhone SE ကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းဈေးကွက်သို့ရောက်သောအခါအောင်မြင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျရှုံးမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။။ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုဤစာမူအပေါ်မှတ်ချက်များအတွက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုရေးကွန်ယက်များမှမည်သည့်နေရာတွင်မဆို၊ သင်၏ခေါင်းစဉ်နှင့်သင်၏နေ့စဉ်ထင်မြင်ချက်များကိုသင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုသိရန်မျှော်လင့်နေသည့်နေရာတွင်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပေးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးတွေကတဆင့်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » iPhone SE သည်ဈေးကွက်တွင်အောင်မြင်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၇ ချက်ရှိသည်
Reinhard ပွန် ဟုသူကပြောသည်
၄ လက်မအရွယ်အစားရှိရောင်းချခြင်းရှိမရှိ Apple ကအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်သည်
Reinhard Pon ကိုပြန်သွားပါ
ကြည့်ရအောင် ... ဘယ်တော့မှမပျက်ကွက်ဘူးဆိုတာလုံးဝမမှန်ဘူးဆိုတာကြည့်ရအောင်။ iphone 5c ဟာအတော်လေးပျက်ကွက်ခဲ့တယ်
Angel Aznar ဟုသူကပြောသည်
iPhone က၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအားသွင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း Sony က၎င်းကို Samsung ရိုက်သည့်အခါသို့မဟုတ် Samsung ကပြုလုပ်သည့်အခါကဲ့သို့မထင်ရှားပါ။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Apple သုံးစွဲသူများသည်အရည်အသွေး၊ ဈေးနှုန်း၊ ဒီဇိုင်း၊ ကြာရှည်ခံမှုအတွက်မဝယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Apple သုံးစွဲသူများသည် Apple လိုဂိုအနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့် ၀ ယ်ကြသည်။ အမှိုက်ဖြစ်ခြင်း၊ Samsung သို့မဟုတ် Sony တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပါးစပ်ထဲထိုးသွင်းနေခြင်းကိုဂရုမစိုက်ပါ။ သူတို့လိုချင်တာကသူတို့ဟာ Mercedes ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကိုသယ်ဆောင်နေကြောင်းပြသရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဒီ "Mercedes" သည်နှစ် ၈၄ မှအင်ဂျင်နှင့်ပုံမှန်ဈေးထက်ကျော်လွန်နေသေးသည်။
အိုင်ဖုန်း SE က "မင်းရဲ့ iPhone ကိုခွေးလှေးစျေးက ၀ ယ်ပါ" ဒါမှမဟုတ် "ဆင်းရဲတဲ့ hipsters ၏ iPhone" လိုငါနံ့။
ကောင်းပြီ၊ ဒါမှမဟုတ်သင်က“ macSuaries” ဒါမှမဟုတ် Apple ကစာနယ်ဇင်းသမားကောင်းများအတွက်ပေးဆပ်ပေးသောကြောင့်ပဲ။ မရရှိလျှင်ဆောင်းပါးတပုဒ်သည်အကြိုက်ဆုံးကဲ့သို့မလိုအပ်သောအရာကိုကျွန်ုပ်မသိပါ
Ángel Aznar အားပြန်ပြောပါ
ဤမှတ်ချက်ဖြင့်သင်သည်သင်အနည်းငယ်သာသိကြောင်းနှင့် Apple ထုတ်ကုန်များ၏အသုံးပြုသူအကြောင်းအနည်းငယ်သာသိကြောင်းပြပါလိမ့်မည်။ iPhone ကဖက်ရှင်ကျတယ်ဆိုတာကိုတော့ငါမငြင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Apple သုံးစွဲသူတွေကဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုကြာရှည်ခံမှု၊ လွယ်ကူမှု၊ သူတို့၌ပန်းသီးအနည်းငယ်ရှိသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲသူတို့သည်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစ၍ Apple နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အက်ပလီကေးရှင်းအများစုကိုသိမ်းဆည်းထားသည်ဟုပြောနိုင်သည်။ အချို့သောသူများသည် Mac G1989 Quicksilver power, ibook G4 သို့မဟုတ် iPods4ကဲ့သို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ငါပြောတာက android mobile ဒါမှမဟုတ် PC တစ်လုံးဝယ်လိုက်ရင်ငါရှုံးတာပဲ
သင်သည်ဤစတိုင် iPhone ကိုစောင့်နေခဲ့သည်။ ငါထွက်ပေါ်လာတဲ့ iPhone5တွေအားလုံးကို iPhone6ထက်ပိုပြီးကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ iPhone4or5ကိုအသုံးပြုသူများ (ဒီဟာကပန်းသီးအတွက်မဟုတ်ဘဲထုတ်ကုန်ရဲ့ဘဝနဲ့အရည်အသွေးကိုကြည့်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်) ကျွန်ုပ်တို့သုံးဆဲဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောအရာများနှင့်ဆင်တူသော်လည်းတိုးတက်လာသောဈေးနှုန်းချိုသာသောကုန်ပစ္စည်းကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ငါကလူတွေကို၎င်း၏အရည်အသွေး, ၎င်း၏ခုခံမှုအတွက်ဝယ်သောသူတို့အားထုတ်ကုန်များထဲမှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသံသယမရှိပါ။ ၎င်းသည်သင်ပြောသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စျေးမကြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းကြောင့်ထုတ်ကုန်သည်တန်ဖိုးရှိသည်။
fooView သည်သင်၏ Android ဖုန်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းသစ်ကိုပေးသည်